Isebenza njani i-Skype: Imisebenzi esisiseko yeapp | Iindaba zeGajethi
Isebenza njani i-Skype
I-Skype iye yaba kwisixhobo esisisiseko sezigidi zabantu emhlabeni jikelele. Ndiyabulela esi sicelo, esinokusisebenzisa kwikhompyuter nakwi-smartphone, sinokudibana nabahlobo, usapho okanye osebenza nabo ngendlela elula. Isivumela ukuba sincokole ngemiyalezo, kunye neefowuni kunye neefowuni zevidiyo. Ke lukhetho olunomdla omkhulu.
Kubantu abaninzi sisixhobo esitsha, amanyathelo abo okuqala anokungabi lula. Apha sikubonisa ukuba uthathe njani amanyathelo okuqala kwi-Skype. Ukuze uyazi ukuba isebenza njani kunye nemisebenzi ephambili esele sinayo kuyo. Ke, uya kuba nakho ukufumana okungcono kuyo.
1 Yenza iakhawunti kwi-Skype
2 Qwalasela iprofayile
3 Fumana kwaye ungeze abafowunelwa kwi-Skype
4 Thumela imiyalezo
6 Iifowuni zevidiyo
Yenza iakhawunti kwi-Skype
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuze sikwazi ukusebenzisa esi sixhobo kukwenza iakhawunti. Ukuba uneakhawunti yeMicrosoft, ungangena usebenzisa iSkype. Njenge-Hotmail okanye i-akhawunti ye-Outlook, umzekelo, ke kule meko kulula kakhulu. Kwimeko apho ungenayo iakhawunti, kuya kufuneka uyenze, onokuyenza ngqo xa ukhuphela inkqubo kwikhompyuter yakho. Sele sikubonisile uyenza njani iakhawunti yeskype. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo.
Xa sele singene kwiakhawunti, sinokumisela iprofayile yethu kwi-Skype. Oku kuthetha ukuba singalutshintsha ulwazi esifuna ukubonisa kulo, ukuze abantu abasongeza njengabafowunelwa babone. Le yinto esinokuyenza ngendlela elula ukusuka kwisicelo uqobo kwikhompyuter.
Ngaphezulu ngasekhohlo kwesikrini, kukho uphawu lwe-ellipsis ezintathu. Xa sicofa kuyo, kuvela iindlela ezimbalwa, enye yazo kukuqwalaselwa. Ifestile ivula njengoko ibonwayo kwifoto, apho sinokuhlela khona iprofayili. Singakhetha igama lomsebenzisi esilifunayo, Ukongeza ekugcwaliseni ngolwazi lwakho malunga nathi. Igama lomsebenzisi lokukhetha yinto ebalulekileyo, kodwa ngakumbi kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwesi sicelo.
Ukuba siza kusebenzisa i-Skype ngokufanelekileyoKe kubalulekile ukusebenzisa igama leprofayile elifanelekileyo, elingenakuvelisa umfanekiso ombi. Ezi ntlobo zeenkcukacha zibalulekile maxa onke, kodwa sinokulibala ngamanye amaxesha.
I-Skype ngoku iyakwazi ukuguqulela incoko zakho kwiilwimi ezilithoba ngaxeshanye
Fumana kwaye ungeze abafowunelwa kwi-Skype
Kwi-Skype sinethuba lokuba yongeza abantu kubafowunelwa bethu. Ukuze sikwazi ukunxibelelana nabo nanini na sifuna, ngokuthumela imiyalezo, ngeefowuni okanye ngevidiyo. Kwicala lasekhohlo lesikrini sinephaneli, apho sinokubona khona ukuba kukho ibha yokukhangela. Yeyona esinokuthi siyisebenzise ukukhangela abafowunelwa kwisicelo ukubongeza.
Xa sifuna abafowunelwa singasebenzisa iindlela ezininzi. Kuyenzeka ukuba ufake igama lakho lomsebenzisi, ukuba siyalazi. Unokusebenzisa iakhawunti yakho ye-imeyile, okanye igama lalo mntu kunye nesixeko. Ngale migaqo yokukhangela kuhlala kunokwenzeka ukuba ufikelele kule profayili, esingayongeza nangaliphi na ixesha.
Xa simfumene loo mntu, Kufuneka nje ucofe iprofayile yakho kwaye siza kufumana ukhetho lokuba Molo. Cofa kuyo kwaye lo mntu uya kufumana umyalezo, ukuze abe nakho ukusongeza njengonxibelelwano. Nje ukuba oku kufunyenwe, sinokudibana nalo mntu kwi-Skype, sithumele imiyalezo okanye senze iminxeba.
Ukuthumela imiyalezo komnye wabafowunelwa bethu, ngokungathi yingxoxo yencoko njengakwezinye izicelo, kulula kakhulu. Kufuneka ucofe kwigama lomfowunelwa kuluhlu lwabafowunelwa, kwicala lasekhohlo lesikrini. Ngokwenza oku, incoko iya kuvela embindini wesikrini kwaye singaqala ukuncokola. Ezantsi kwayo sinebhokisi yokubhaliweyo, apho uza kubhala khona umyalezo.
Sinokubhala umyalezo ngesiqhelo. Ukongeza, i-Skype isivumela ukuba songeze ii-emojis, ii-GIF kunye nabanye kule miyalezo. Ukuba sifuna, sikwanayo ukuthumela iifayile kwezi ngxoxo, ezinjengeefoto, amaxwebhu okanye amakhonkco. Ngale ndlela, isebenza njengezinye izicelo zokuthumela imiyalezo, ke intle kakhulu kule meko.
Ukuba omnye umntu usithumelela iifayile ngeSkype, zihlala zikhutshelwa kwifolda ekhethekileyo. Ifolda yokukhuphela ihlala yenziwe kwikhompyuter yethu, ngaphakathi kwifolda yokukhuphela, apho sifumana khona zonke iifayile okanye iifoto ezithunyelwe kuthi ngesicelo.
Iifowuni yenye yeempawu zeenkwenkwezi zeSkype, Esinye sezizathu esincede ukuthandwa kwayo kule minyaka idlulileyo. Ukuba ngomzuzwana othile uzimisele ukwenza umnxeba welizwi nomntu, kulula kakhulu, kwaye nokuba ukhululekile. Kuya kufuneka ufake iprofayile yakho kwisicelo, ngokungathi uza kuba nengxoxo. Phezulu kwesikrini uza kubona uphawu lwefowuni. Cofa kule icon ukuqala umnxeba.
Iya kuqala ke xa omnye umntu eyamkela. Ngokwesiqhelo ulinda malunga nomzuzu ukuba omnye umntu aphendule okanye hayi. Ukuba akukho mpendulo, iyavalwa kwaye ungazama kwakhona. Ukuba ngomnye umntu ositsalelayo, iya kuvela kwiscreen ifestile ebhengeza ukuba bayasibiza, ikhupha isandi. Siza kuthi emva koko sifumane i-icon yefowuni eluhlaza ukuyamkela kunye ne icon ebomvu yefowuni ukuba sifuna ukuyala umnxeba, njengakwi-smartphone yethu.
Ilizwi lokufowuna linokuhlala ixesha elide njengoko sifuna. Kubalulekile ukuba nonxibelelwano oluqinisekileyo lwe-intanethi ngexesha layo. Kuba kumaxesha amaninzi sinokuthi singenelele kuyo. Ekupheleni komnxeba, uSkype uhlala esicela ukuba sinike uvavanyo lomgangatho wayo. Ukuze ukwazi okungakumbi ngayo.
Iifowuni zevidiyo yenye yemisebenzi eye yaphakamisa iSkype. Ngumsebenzi osivumela ukuba sinxibelelane nabahlobo kunye nosapho, nangona ikwasetyenziswa kakhulu kwindawo yokusebenza. Ukuba neentlanganiso zeshishini ngokude ngokulula. Umsebenzi uyafana ncam nolo weefowuni kule meko.
Kuya kufuneka singenise iprofayile yalomntu kwaye phezulu siza kubona ukuba kukho i icon yekhamera. Cofa kuyo ukuze uyiqale, nangona umnxeba wevidiyo ungaqali de umntu amkele. Asizukubona omnye umntu de bayamkele ikholi yevidiyo kwi-app.
Xa ndiyamkele, Siza kubona omnye umntu kwiscreen kwikhompyuter yethu okanye kwi-smartphone. Sikwabonakala kwiscreen, kwiwindows eyahlukileyo, ubukhulu bayo esinokuhlengahlengisa nangaliphi na ixesha. Ke ukuba sifuna ukubona omnye umntu ngcono, sinokuguqula ubungakanani befestile yethu ngendlela esiyithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Isebenza njani i-Skype
UGqr Mario ngoku ufumanekile nge-iOS kunye ne-Android simahla
Ziziphi iiakhawunti ezabelwana ngazo kwi-Gmail kunye nendlela yokuziqwalasela